4 Iindawo Underrated EYurophu onokulufikelela By Train | Gcina A Isitimela
ekhaya > Train Travel Holland > 4 Iindawo Underrated EYurophu onokulufikelela By Train
Ngokuba zonke bahambi abukhali phandle abafuna ithuba iindawo eYurophu onokulufikelela ngololiwe ngenxa enokuba kunokuba amkele ngoyolo mnandi umdla kaloliwe ngaphezu-moya, nantsi intwana iindaba enkulu uya umthande. uhambo uloliwe yaseYurophu babengena ezintliziyweni imizi emikhulu ngemihla, ngokuvumela ukuba bafumana izimanga eYurophu without breaking the bank while enjoying the unique experience of a train ride.
Here are some great indawo eYurophu onokulufikelela ngololiwe:
eStrasbourg (Fransi )
Le ride Uloliwe eya kutsho malunga 5 iiyure kwaye ibize malunga £ 168 ukuba itikiti lokubuya. Ukuba ndayicingisisa into ngokundwendwela France, nantsi kutheni kufuneka ukuhlisa ukuba isimo sengqondo. Yenza itikiti lakho loliwe ezibekwe kwaye nentloko kule lizwe elihle. okokuqala off, abafazi French ezithandekayo. Isibini, ukutya kakhulu, yaye isiselo somdiliya kuba yonke into bathi - iyabiza kodwa kunomvuzo. Eli lizwe utshata ngempumelelo mbobo kunye neempembelelo German yeyona omnye mava kakhulu bendalo uza ufika ukubona ebomini. Kuzo zonke Iindawo e Europe onokulufikelela By Train, EStrasbourg kuya kufuneka nabasemabeleni, kwaye uya kuba uthatha wedwa phambi super ezimangalisayo eStrasbourg Cathedral.
Cologne (Jemani )
Bambani incwadi uza ufuna ukufunda i malunga 5.30 iiyure kuba loo nto kuya kuthatha ixesha elide kangakanani na ukufika Cologne. Ukuze aphendule umbuzo wakho kude: ewe, uya kuba ukutshintsha oololiwe e Brussels. Le itikiti ukubuya ixabisa £ 177, kodwa kuluncedo ngayo. Ngoba? Ngokuba lo, ngaphandle kothandabuza, esona sixeko nomtsalane e Germany; regally ehleli phezu ngasechwebeni iRhine, Cologne ukhangela ezimangalisayo kulo unyaka wonke. Ingaba wena foodie? Uya uyithande eateries ngapha lamanzi tsala ka Frankenturm! kwakhona, hlola Museum Ludwig ukuba Ukubheka art libalaseleyo mihla.
Rotterdam (elamaDatshi )
Rotterdam yenye yeendawo eziphambili eYurophu onokulufikelela ngololiwe. Uya ukukhwela malunga neeyure ezine, kwaye kuya kuba utshintsho koololiwe e Brussels. Kufuneka angalibali phezu £ 185 kwitikiti lakho ubuye. Rotterdam kudala waba uhlobo elibi ngenxa izibuko yayo gritty kunye nto kodwa milenge kunye ekuhanjisweni. kutshanje, kuba enikina off ukuba isidima kunye nokufumana nabakhenkethi ukubona enqatheni ekukhanyeni entsha ngokupheleleyo. Le lanyakenye, uya umthande lo mzi ngenxa ukufunyaniswa yayo ubutyebi nobuciko, the Museum Boijmans Van Beuningen which “which runs the gamut from Brueghel the Elder to Salvador Dali.” Kukho kakhulu ukubona kunye namava nantsi, kunye nento yokuba Rotterdam i onokulufikelela ngololiwe enye nje plus.
Ukwengeza, endleleni apho uya kubona edume emasimini eTulip, oku kuza kuba ukuba isixeko ulonwabo olukhulu.
Pick yethu yokugqibela ku “Iindawo e Europe onokulufikelela By Train” i – Antwerp (Bheljiyam)
Eyona ndlela ilula ukuya Antwerp baye malunga neeyure ezine ngololiwe ukutshintsha noololiwe e Brussels. Akuyi uhlawule ngaphezulu £ 87 kuba itikiti lokubuya into emangalisayo. Nangona yayo ingumnqa (umzi ekumda phakathi Belgium ne Netherlands), Antwerp, exakayo, ukufikelela super ngololiwe. Unga nokuba uthenge itikiti "Nayiphi Station Belgian" nge Eurostar uze naphi kweli lizwe, Antwerp zibandakanya - ngexabiso efanayo ukukhwela ukuya eBrussels. Antwerp iya kuba umdla kakhulu kuba bonke abathandi diamond: Antwerp, Belgium iyazingca on District wayo Diamond obakhe yokuba isixeko apho ezinye elidlula kakhulu ezingaqhelekanga, wokucoca, kunye norhwebo yeedayimane / GEMS zenzeke.
Breda Antwerp Uqeqesha
Qhagamshelana Gcina A Isitimela babhukishe uhambo lwakho uloliwe kwiindawo eYurophu onokulufikelela ngololiwe kwaye siya usizi lwenu yazo naziphina iifizi ukubhukisha ebizayo, Iinkqubo yezohambo elukhuni, amazinga engenakwenzeka. Siye waba begqubuthele elowo inyathelo indlela. and, kanye ngayo yonke into – qinisekisa ukuba ube ekhwela yakho loliwe oya, kuthatha ixesha elininzi iifoto kunye usazise zonke baya njani!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#rotterdam Antwerp strasbourg tips uloliwe travelcologne